dia nahazo fandresena fanindroany ny ekipan’ny 3Fb Atsimo Andrefana raha nifanandrina tamin’ny As Jet Mada Itasy tetsy amin’ny kianjan’i Mahamasina teo amin’ny andro faha-4 amin’ity fifaninanana ity tamin’ny sabotsy 11 mey 2019 teo. Baolina matin’i Eusèbe n° 17 tany amin’ny minitra farany tamin’ny fanampin’ora 90’+2 no niantoka an’io fandresen’ny 3Fb io.
Ireo vokatra hafa teo amin’ity andro faha-4 –n’ny dingana faha-2 ity : CNaPS Sport Itasy 2 – 0 Ajesaia Bongolava ; Zanak’ala Matsiatra Ambony 1 - 2 As Adema Analamanga ; Fosa Juniors Boeny 0 - 0 Fca Ilakaka. Nahatratra 8 tapitrisa ariary ny lelavola voaangona ka hatolotry ny ligin’ny baolina kitra any Matsiatra Ambony sy ny Zanak’ala Fc hanohanana ny Barea miatrika ny CAN 2019 araka ny fampanantenana nataon’izy ireo.